FATY HITA TENY IKOPA
Lehilahy iray efa nanjavona hatramin’ny volana jona no hita faty tampoka tetsy Ikopa omaly.
Efa potika tanteraka ny tenany tamin’ny fotoana izay nisintoman’ny olona azy tao. Tsy mbola voamarika na nisy namono na tsia satria efa tsy nisy azo nijerena tsara ny vatany intsony noho ny fahasimbana. Betsaka izay olona hita faty tao izay ary ny ankamaroany dia maty an-drano, ankoatr’izay novonoina ary natsipy tao.
ANTSON’NY MPONINA ANY ANDROY
Tsy nisy vahaolana hatreto ny fiantsoan’ny mponina ny lehiben’ny faritra Androy ny mba hitadiavan’io farany vahaolana maika mba hanajanonana ny fanaovan’ireo mpandraharaha sinoa fotodrafitr’asa izay manahirana ny olona ao an-toerana. Nomena 48 ora io manam-pahefana io mba hamaha ny olana ary omaly izy dia namaly ny vahoaka ka nilaza fa ara-dalàna ilay orinasa sinoa sy ny fividianany tany izay hanorenany ny orinasany. Tsiahivina fa hatramin’ny fasana dia narodana ka isan’ny nampihetsika ny olona izany. Ahiana ho ratsy ny fivoaran’ity raharaha iray ity.
MPIANATRA TANY CHINE
Tafody teto an-tanindrazana ny alahady teo ny tovolahy iray izay nandrato fianarana tany Chine kinanjo tsy navelan’ny manam-pahefana tany an-toerana nody rehefa lany ny « visa » nampiasainy. Voatery niditra an-tsehatra ny Primatiora nanelanelana sy nitady vahaolana izay vao tafody ilay mpianatra izay sady efa tsy nisy sakafo intsony no tsy nisy vola intsony ihany koa. Mbola betsaka ny mitovy aminy any an-toerana raha araka ny fantatra. Mahatalanjona ihany ny hoe efa fantatra ny fijaliana sy ny tebiteby iainana any dia mbola betsaka ihany ny sahy mirisika.
OLONA 3 MAY KILAN’NY AFO
Olona telo no may kilan’ny afo tetsy Anjanahary. Trano hazo miisa folo izay ipetrahan’ny fianakaviana fito no indray nasesin’ny afo ny alin’ny alatsinainy hifoha talata teo. Pitik’afo izay nahazo ny moto iray ary niitatira tsy vaofehy intsony no niantombohan’ny loza. Rangahy sy ny vadiny ary ny zanany kely roa taona no maty tao anatin’ilay trano ka tsy avotra intsony. Tonga teny an-toerana ny solon-tenan’ny ben’ny tanànan’Antananarivo nanome fanampiana maika ireo fianakaviana tra-doza.
Folo volana aty aoriana tsy mbola nivoaka ihany ny karatra maha-matihanina ny mpanao gazety. Voaporofo izany ny tsy fahamatoran’ny kaomisiona napetrak’i Rolly Mercia ary ny vokatr’izany dia lasa mikorontana ilay asa ka ialokalofan’ny mpanao ratsy sy mpisoloky. Isan’izany ny nitranga tetsy amin’ny HCC tao anatin’izay herinandro roa nametrahan’ny kandidà dosie izay : nisy nisandoka ho mpanao gazety ary maka volabe amin’ireo olona hirotsaka hofidiana mba hanaovana dokam-barotra azy ireo. Potika tanteraka ilay asa masina noho ny hadalàn’ny fanjakana.
JIOLAHY TENY ALASORA
Tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany, ny alin’ny alatsinainy hifoha talata teo no tonga tao amin’ny tanànan’Alasora ireo jiolahy miisa folo raha kely indrindra. Avy hatrany dia nanapoaka basy izy ireo ary mba hampihorohoroana ny mponina. Trano iray izay sady toeram-pivarotana no notafihan’ireo andian-jiolahy ary lasa tamin’izany ny vola mitentina 3.5 tapitrisa ariary, ny fahitalavitra miampy ny finday rehetra tao an-trano ary koa ny entam-barotra. Tsy nisy sahy nivoaka ny olona na dia somary naharitra aza ny fanafihan’ireo olon-dratsy. Basy vita gasy miisa telo no nampiasain’ireo.
MISANDOKA HO ZANDARY
Lehilahy iray no misandoka ho zandary ary misoloky ho maha-tafiditra izay te ho mpianatra ho zandary. Manao fanamiana izy ary manana karatra ary koa mitondra galona. Tsy zandary ihany no hisolokiany fa mbola manana karatra maha-mpitsabo, mazava hoazy fa sandoka ihany koa. Hita tao an-tranony avokoa izany fitaovana rehetra izany nandritry ny fisavàna nizay natao. Nidoboka am-ponja ao Toamasina ity lehilahy mpisandoka andraikitra ity.
FIFIDIANANA ATY AFRIKA TOKOA
Tsy resa-be fa tena nirotsaka ho filoha tokoa i Didier Ratsiraka. Nahatalanjona ny maro izany ary nataony tao anaty faradoboka ny fanaterana ny antotan-taratasy. Mazava izany izao fa tena fifidianana aty afrika tokoa ity mitranga ity. Nilatsaka avokoa na ny mpanakarena tampoka na ny dadabe efa mangozohozo na ny mpitondra fivavahana na koa ny mpanao mazia. Mijanona eo amin’ny tantaran’ny firenena ity fifidiana iray izay be kandidà indrindra ity hatramin’izay.
MAEVATANANA TSY MILAMINA
Nitsoaka tany anaty ala ny olona raha tonga ny jiolahy tsy voafaritra isa izay nanafika tao anatin’ny maizina. Horohoro ny niainan’ny olona izany ary dia navela fotsiny teo ny trano sy ny fananana mba hanavotana ny aina. Ny ampitson’iny vao tonga tao an-toerana, tao Ambotofotsy-Maevatanana ny mpitandro ny filaminana. Tsy horakoraka no nandraisan’ny olona an’izany fa kosa siotsioka fanesoana mba hanamarian’ireo ny hatezerany satria tsy mba tonga ara-potoana namonjy ireo mpitandro ny filaminana.